Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo dadka weydiinaya nuuca xukumadeed ee ay doonayaan – Kalfadhi
Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodka Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay inuu si elektaroonik ah uga qeyb-galiyo shacabka Soomaaliyeed iney u codeeyaan nuuca hogaan ee ay jeclaan lahaayeen in ay yeeshaan, kaas oo hadda ah Madaxweyne iyo Reysal Wasaare uu isagu soo magacaabay.
Guddigu waxa uu soo bandhigay su’aal ah: Nidaam fulin noocee ah ayaa kula haboon? Taas oo uu ula jeedo nuuca xukuumadeed ee aad la rabto ama la jeclaan lahayd Soomaaliya sheeg, waxa uuna Guddigu bixiyey ikhtiyaar laba ah: 1. Nidaam Madaxweyne iyo Raysalwasaare (Qaabka hadda noo degsan) iyo 2. Nidaam Madaxweyne iyo Madaxweyne Kuxigeen.
Codeyntan, oo teer iyo shalay ka socotay Bogga Feysbuugga ee Guddigaas ayaa waxaa ka qeybgalay ilaa hadda 4 kun oo qof ku dhawaad, oo Feysbuuggooda uga codeysay bandhiggaas. Inkasta oo ay dadka codeynaya hadba dhinac u badanayaan, oo 2-da ikhtiyaar ee la siiyey uu marba mid codka u badanayo, hadda waxa ay dadka codeeyey 52% doorteen ilaa iyo hadda nidaamka waqtigan jira, halka 48% ay doorteen Nidaam Madaxweyne iyo Madaxweyne Kuxigeen.
Halka ay mareyso codeynta hadda ka socota Bogga Feysbuugga ee Guddiga Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya
Codeyntaan waxay socon doontaa ilaa Khamiista soo socota, oo ku began 21-ka Febaraayo, waxaana dabcan uu Guddigu ku qaadan doonaa go’aan halka ay dadku u bataan, kaas oo qeyb ka noqon doona waxyaabaha uu Guddigu ku saleynayo qodobbada cutubyada ka hadlaya nuuca hogaanka ee dalka, kaas oo ay ku wadaan dib-u-habeyn leh wax-ku-daris iyo ka dhamis intaba.
Guddiga Dib-u-eegista iyo Lasocodkaa Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu bilihii ugu dambeeyey ee sanadkii hore ilaa sanadkan si dardar leh uga shaqeynayaa Qabyo-tirka Dastuurka, iyada oo isaga, Guddiga Madax-banaan ee Dastuurka iyo Wasaaradda Dastuurka ay si wadajir ah ugu celceliyeen dhawr mar iney doonayaan in sanadkan la dhameystiro Dastuurka Ku-meel-gaarka ah.